Iindawo eziPhezulu zeBitcoin zeMigodi yeLifu ngoMeyi ka-2022-Iizinto eziluncedo kunye neeNgcaciso eziFihliweyo.
Iindawo eziPhezulu zeMigodi zeLifu? Isikhokelo sethu samahhala se-2022 kwiiNdawo eziMnandi zeMigodi zeLifu
Ukuhlaziywa: 18 May 2022
Ngexesha elingekude kangako, ungachitha amakhulu ambalwa eedola kwiingcali zehardware kwaye wenze isuntswana elimnandi le-cryptocurrencies yezemigodi. Nangona kunjalo, ngeshishini ngoku ligcwele kakhulu, akunakwenzeka ukuba ujonge ngaphakathi. Kweli nqaku, siyaphonononga Bitcoin imigodi yamafu.
Iqonga lezemigodi yelifu leBitcoin
I-SHAMINING ibandakanyeka kwilungiselelo lemigodi yefu ngelixa isebenzisa iteknoloji, ephuhliswe ziingcali kwi-IT kunye ne-cryptocurrencies field. Olona luvo lwemveliso sisisixhobo esisebenzayo esahlukileyo esisebenza ngekhompyutha. Sithanda ukudibanisa abatyali-mali, kubandakanywa nabasanda kufika, kwiqonga elinye kunye. Ukuthembela kwabathengi bethu kusekwe kubungqina obucacileyo: bafumana umvuzo wabo ngokunyanisekileyo yonke imihla.
Gcina imali kwi-Intanethi naphi na
Rhoxisa imali yakho ikhuselekile kwaye kwangoko
Lawula abavukuzi bakho kuso nasiphi na isixhobo, nokuba kukwidesktop okanye iselfowuni
Imali yakho eyinkunzi isemngciphekweni
Kungenxa yokuba indawo yemigodi ilawulwa linani elincinci labadlali-uninzi lwazo lusekwe e-China. Ngokutsho oko, usenethuba lokwenza inzuzo eqhubekayo ngokumbiwa kwemigodi ngokwabelana ngezixhobo zakho nabanye abatyali mali.
Eyaziwa ngokuba 'yimigodi yelifu', akukho mfuneko yokuthenga nasiphi na isixhobo sehardware okanye ukufaka umbane. Endaweni yoko, uthenga nje 'amandla amakhulu', kwaye uyakufumana isabelo senzuzo-ngokulingana notyalo-mali lwakho.
Ukuba unomdla wokujonga ukuba ingaba le yinto ehlangabezana neenjongo zakho zotyalo-mali lwexesha elide-qiniseka ukuba ufunda eyethu Isikhokelo sango-2022 sasimahla kwiiNdawo eziGcweleyo zeMigodi zamafu.
Phawula: I-Cloud mining licandelo elingalawulwayo, ngoko ke kukho iimfumba zeeplatifomu ezingenazo iinjongo ngaphandle kokuba imali yakho. Ngaloo ndlela, hamba ngononophelo olukhulu ngaphambi kokuba ubhalise.
Yintoni iMining Mining?
Imigodi yefu yinkqubo yeemigodi ezigcina imali njengeBitcoin kunye Ethereum ngaphandle kokufuna ukuthenga nayiphi na izixhobo zekhompyutha. Ngokwesiqhelo, izixhobo zekhompyutha ezifunekayo kwimigodi yeemali ze-crypto kwisiseko se-DIY zinokuxabisa amawaka. Ngaphaya koko, kunye nesiseko se-blockchain esonyusa amanqanaba obunzima ngokuhamba kwexesha, izixhobo ezisandula ukuthengwa kwezixhobo zekhompyuter kungekudala kufuneka zitshintshwe ngezixhobo ezinamandla ngakumbi-emva koko zenze ukuba imali yakho ingafuneki.
Emva koko kufuneka ujongane neendleko zokuqhuba ihardware yakho. Okuncinci kuba kuya kufuneka usebenze iiyure ezingama-24 ngosuku ukuze ube sethubeni lokwenza inzuzo. Ngaloo ndlela, izixhobo ezinamandla zemigodi zifuna umbane ongcolileyo ukuze usebenze, enye indleko eya kutya kwi-ROI yakho yexesha elide. Yilapho i-Bitcoin cloud mining idlala khona.
Kwindlela yayo esisiseko, iBitcoin imigodi yelifu ikuvumela ukuba ufikelele kwindawo yemigodi ye-cryptocurrency ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho - ngaphandle kokufuna ukuthenga naziphi na izixhobo okanye ukusebenzisa nawuphi na umbane. Ngokuchasene noko, uyakuba utyala imali kwimisebenzi yezimbiwa esebenzayo esele inesakhelo esifunekayo sokumba umgodi ngempumelelo.
Ngokwenza njalo, uyakufumana isabelo senzuzo yezimbiwa-ngokulingana nemali oyityalayo. Oku kukuvumela ukuba ubone imbuyekezo kutyalo-mali lwakho ukusuka kusuku lokuqala, njengoko amaqonga okumba imigodi yelifu eBitcoin ahlawula mihla le. Uya kuthi emva koko ube nethuba lokuphinda utyale inzuzo yakho, okuthetha ukuba ungazuza kwiziqhamo zenzala yomdibaniso.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uxinzelelo lokuba indawo yemigodi yeBitcoin ihlala isebenza njengeWest West. Ngelixa kukho inani lamaqonga amiselweyo nathembekileyo phaya-uninzi alunjalo. Ngapha koko, kuye kwakho amaqonga amaninzi emigodi yefu anyamalale nje ngobusuku obunye- ethatha imali yabatyali zimali kunye nabo endleleni. Kananjalo, kuya kufuneka unyathele ngononophelo olukhulu.
Ziziphi iinzuzo kunye neengozi zokuLungiswa kweMigodi?
I-cryptocurrencies yam yam ngaphandle kokufuna nayiphi na i-hardware.
Akukho mfuneko yokusebenzisa umbane.
Tyala imali encinci okanye eninzi njengoko unqwenela.
Bona imbuyekezo kutyalo-mali lwakho ukusuka kusuku lokuqala.
Khetha i-cryptocurrency onqwenela ukuyifaka kwilifu.
Fumana isabelo senzuzo yezemigodi ngokomlinganiselo wotyalo-mali lwakho.
Iindawo ezininzi zemigodi yefu ezinomthunzi.
Iinzuzo ezinokwenzeka ziphantsi kakhulu.
Asebenza njani amaQonga okuGaya iMigodi?
Ngaphambi kokujoyina iqonga lokumbiwa kwemigodi yelifu okokuqala ngqa, kubalulekile ukuba ubenolwazi olomeleleyo lwendlela esebenza ngayo le nkqubo. Kananjalo, singacebisa ukuba siqwalasele la manyathelo ngamanyathelo alandelayo.
Phawula: Kwimizekelo yemigodi yelifu esiyinika apha ngezantsi, sisebenzisa amanani alula kunye nokubala. Oku kukuqinisekisa ukuba uyayiqonda inkqubo ngokupheleleyo.
🥇 Inyathelo 1: Khetha iSiza seMigodi seLifu
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukukhetha indawo ye-Bitcoin yemigodi yefu ehlangabezana neemfuno zakho. Eyona ndlela ilungileyo yokwenza oku kukwenza uphando oluphuculweyo kwiqonga- njengokuthi isiza sisebenze ixesha elingakanani kwaye loluphi uhlolo olufana noluntu.
Sibonise iingcebiso malunga nento ekufuneka uyijonge kwindawo yemigodi ye-Bitcoin yelifu ezantsi kwisikhokelo sethu. Kungenjalo, sikwadwelisa iinketho zethu eziphezulu kwezona ndawo zibalaseleyo zemigodi yamafu ka-2022 ukuya esiphelweni seli phepha.
🥇 Inyathelo 2: Vula iAkhawunti kunye neDepos Fund
Nje ukuba ukhethe iqonga lemigodi yelifu ongathanda ukulisebenzisa, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Kwiimeko ezininzi, uya kufuna kuphela ukubonelela ngedilesi ye-imeyile kwaye ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Oku kungenxa yokuba iisayithi zemigodi yamafu azinabudlelwane neemali ze-fiat - ngoko akukho mfuneko yokuba zikubuze naluphi na ulwazi lomntu siqu okanye lwezemali.
Uya kuthi emva koko ubeke imali, kunye neendawo zemigodi yefu exhasa uluhlu lwee-cryptocurrensets onokukhetha kuzo. Inkqubo isebenza kakhulu ngendlela efanayo notshintshiselwano lomntu wesithathu kwi-cryptocurrency, apho kuya kufuneka ukuba ugqithisele imali kwisipaji sakho sangasese.
Cofa kwi-cryptocurrency ofuna ukuyifaka kwindawo yemigodi yelifu.
Khuphela idilesi yesipaji yediphozithi eyodwa kwibhodi eqhotyoshwayo.
Yiya kwi-wallet yakho yangasese kwaye uncamathisele kwidilesi.
Faka imali onqwenela ukuyifaka kwaye emva koko udlulisele imali.
Indawo yakho yemigodi yelifu kufuneka ifakwe kwi-10-20 imizuzu.
🥇 Inyathelo 3: Khetha i-Cryptocurrency yeMayini
Nje ukuba ukhethe iqonga lokumbiwa kwemigodi ngelifu ongathanda ukulisebenzisa, uya kuba nakho ukwenza utyalo-mali. Iindawo zemigodi yamafu zihlala zikunika ithuba lokumba umgodi ngenani lee-cryptocurrensets ezahlukeneyo, nganye nganye eza kuza neenzuzo zayo kunye neengxaki.
Umzekelo, ngelixa ukumbiwa kweBitcoin kubonelela ngozinzo ngakumbi kunezinye iimali ezixabisa kwimarike, ukumbiwa kwemigodi ye-alt-coin engathandwayo kunokubangela ukubakho okuphezulu.
Phawula: Kukho inani lezinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuba ukhethe ukuba yeyiphi i-cryptocurrency oza kummba yona - njengomlinganiselo omncinci we-hash, ubungakanani bekhontrakthi, kunye nesivuno esiqikelelweyo. Oku sikugubungela ngakumbi kamva.
Nje ukuba ufumane i-cryptocurrency ongathanda ukuyifaka emgodini, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba unqwenela ukutyala imali engakanani. Nje ukuba wenze, uyakuba nemali ethathwe kwi-akhawunti yakho eseleyo kwaye inkqubo yotyalo-mali igqityiwe.
🥇 Inyathelo 4: Fumana iSahlulo sakho kude kufike isiQinisekiso seMvumelwano
Kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka utyale ixesha elincinci. Eyaziwa ngokuba 'liXesha leSivumelwano', oku kuchaza ubude bexesha oza kulifuna ukuba utyalo-mali lwakho lokuqala lutshixelwe. Oku kusebenza ngendlela efanayo kwiibhondi ezinexabiso elimiselweyo, kangangokuba uya kufumana iintlawulo zakho zenzala kulo lonke ixesha, kunye nesixa-mali sakho sokuqala sedipozithi ngomhla wokuvuthwa kwekhontrakthi.
Nangona kunjalo, uninzi lweendawo zemigodi yefu ziya kusasaza isabelo sakho senzuzo yemigodi yonke imihla. Oku kuyakwenzeka mihla le yonke de ikhontrakthi ikhule. Xa isenza njalo, uya kuthi emva koko ufumane isixa semali sibuyele ngokupheleleyo.
Utyala imali 1 BTC kwikhontrakthi yezimayini zefu yeBitcoin.
Ikhontrakthi ngunyaka omnye.
I-investment mining investment ihlawula i-0.0001 BTC ngosuku.
Ufumana i-0.0001 BTC yonke imihla ngonyaka omnye.
Nje ukuba ixesha lonyaka liphele, uya kufumana i-1 BTC yakho kwakhona.
Ukuba kuyenzeka, kuyacetyiswa ukuba uphinde utyale imali oyibhatalayo yemihla ngemihla kolunye utyalomali. Oku kuyakuvumela ukuba ukonwabele iziphumo zenzala edibeneyo, oko kuthetha ukuba uza kufumana 'inzala kwinzala' kwaye ngenxa yoko-ukhulise imali yakho ngokukhawuleza okukhulu.
Ukukhetha eyiphi i-Cryptocurrency yeMigodi
Ke ngoku uyazi ukuba amaqonga ezemigodi yefu asebenza njani ngoku, ngoku kuya kufuneka ucinge nge-cryptocurrency ethile onqwenela ukuyenza kum. Oku akukho lula, kuba akukho bungakanani-bunye-zonke iimpendulo kwiingqekembe zeyona yam. Endaweni yokuba kukho iimfumba zezinto eziguqukayo ekufuneka uziqwalasele.
Ixesha elifutshane elinokubakho kule ngqekembe
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka ujonge indlela i-cryptocurrency ebuzwayo esebenza ngayo kwindawo yentengiso evulekileyo. Umzekelo, ukuba ingqekembe ibisendleleni ephezulu kwiiveki okanye kwiinyanga, kunokuba kufanelekile ukutsiba.
Ngoba? Ewe, uya kufumana inzuzo yakho yemigodi yelifu yonke imihla, eya kuthi ihlawulwe kwi-cryptocurrency oyimbiwa kuyo. Kananjalo, ixabiso lokwenene lengqekembe liya kuba nefuthe ngqo kwi-ROI yakho iyonke, ngakumbi ukuba ucwangcisa ukuthengisa iingqekembe zakho nje ukuba zihlawulwe.
✔️ Ixesha elide leNkozo
Ukuba unomdla kwi ixesha elide Ukuba nokwenzeka kotyalo-mali lwakho, kungangcono ukhethe i-cryptocurrency ocinga ukuba inethuba elihle lokunyuka kwexabiso kwixesha elizayo. Ngokwenza njalo, uya kuba ubambe inzuzo yakho yemigodi yelifu ngombono wokuthengisa iingqekembe kwinani leminyaka phantsi komgca.
Ekugqibeleni, ukuba uqinisekile ngokubakho kwemali oyikhethileyo, uza kuba sethubeni lokufumana iingqekembe ngexabiso lesaphulelo ngokumbiwa kwelifu.
Ngexesha leminyaka embalwa yokuqala ye Bitcoin, kunokwenzeka ukuphumelela imivuzo yemigodi ngesixhobo esisiseko seCPU. Kungenxa yokuba kwakungekho khuphiswano phakathi kwabasebenzi mgodini, okuthetha ukuba wonke umntu wayemi ithuba elihle lokuphumelela loo mvuzo ubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, njengoko iBitcoin ngoku iklasi yee-asethi eziibhiliyoni ezininzi, indawo yemigodi ilawulwa linani elikhethiweyo lezixhobo ezifanelekileyo.
Kananjalo, kunokuba kufanelekile ukukhetha imali yedijithali esebenza kwicandelo lezemigodi elikhuphisana kancinci. Ngokwenyani, ukungabaluleki kangako kwengqekembe leyo, kokukhona umsebenzi wakho wokumba imigodi yelifu uza kuba nawo rhoqo ukuphumelela umvuzo webhloko.
Uninzi lweendawo zemigodi yefu ziya kukunika ukophuka kwentlawulo eqikelelweyo kwi-cryptocurrency oyikhethile. Ngamanye amaxesha kuchazwa njengesixa sedola kuyo yonke i-KW / s okanye i-MH / s. Nangona kunjalo, oku kwenza ukuba kube nzima ukwazi ngokuthe ngqo ukuba ungafumana malini, ke sikhetha iisayithi ezinikezela ngezivuno eziqikelelweyo ngokweepesenti.
Qaphela, akukho siqinisekiso sokuba uyakuqonda isivuno esiqikelelweyo esipapashwe sisiza semigodi yelifu, njengoko iimeko zentengiso ziguquka phantse mihla le.
Ndilikhetha njani iSiza sokuGaya iMigodi?
Ukukhetha eliphi iqonga oza kulisebenzisa kwimfuno yakho yokufumana inzuzo kwimigodi yefu lelona candelo linzima lenkqubo. Kungenxa yokuba eli shishini lisebenza ngendlela engalawulekiyo, ke imali yakho ayinakuze ikhuseleke nge-100%.
Nangona kunjalo, sidwelise ezinye zezinto eziphambili ekufuneka uzijongile ngaphambi kokujoyina indawo entsha yemigodi yelifu.
Phawula: Ukuba awunalo ixesha elifunekayo lokwenza olwakho uphando, sidwelise iqonga lethu eliphezulu lemigodi yamafu likhetha ezantsi.
Ut Udumo kunye neRekhodi yokuKhangela
Nangona amaqonga okomba imigodi engalawulwa, usenenqwaba yolwazi olufumanekayo kwindawo kawonkewonke. Okokuqala, jonga ukuze ubone ukuba yaqaliswa nini indawo yemigodi yelifu. Ixesha elide lisebenza-ngcono.
Kuya kufuneka ke uphonononge iiwebhusayithi ezinje ngeReddit ukuvavanya umbono woluntu ngomboneleli wezemigodi yelifu. Ukuba kukho izikhalazo ezingaguquguqukiyo ezivela kubatyali mali bangaphambili besiza, kuya kufuneka uyiphephe.
Iingqekembe zemali ezixhaswayo
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo uhlobo lwe-imali yedatha onqwenela ukuxhasa ngayo iakhawunti yakho yemigodi yefu. Ukuba iqonga alixhasi ingqekembe oyiphetheyo ngoku, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uyokuthenga.
Oku kusenokwandisa ixabiso lotyalo-mali lwakho xa ufaka imali kwimirhumo yotshintshiselwano. Ke vavanya ukuba zeziphi iinkozo zemali ezixhaswayo ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Amaqonga ezemigodi amafu ayacelwa ukuba abe nokuseta ngokugqibeleleyo okumbiwa kwemigodi okwaziyo ukuphumelela umvuzo rhoqo. Ukuba ayenzi njalo, awuyi kuma kwithuba lokwenza nayiphi na imali. Phambili koku sisixhobo sehardware esiliqonga.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, abasebenzi basezimayini bahlala befuna ukuphucula izixhobo zehardware xa inqanaba le-blockchain lobunzima lisonyuka. Kananjalo, phonononga ukuseta indawo yokumbiwa kwemigodi yelifu ekuthethwa ngayo kwaye ngokungxama-yeyiphi i-hardware eyeyayo.
Indawo yeqonga lokumba imigodi ngelifu nayo kufuneka idlale indima ebalulekileyo kwinkqubo yakho yokwenza izigqibo. Umzekelo, uya kufuna ukukhetha umsebenzi wezemigodi osekwe kwilizwe elinamaxabiso aphantsi amandla. Oku kukuqinisekisa ukuba isivuno sakho asityiwa kukusetyenziswa kombane okhulayo.
Ngokufanayo, uya kufuna ukukhetha indawo yemigodi yefu esekwe kwindawo efanelekileyo ye-crypto. Ukuba akunjalo, kuhlala kukho ithuba lokuba umsebenzi uvaliwe ngabasemagunyeni.
Kubalulekile ukuvavanya ubuncinci besivumelwano apho utyalomali lwakho luza kubotshelelwa. Umzekelo, ukuba indawo yemigodi yelifu ifuna ukuba bonke abatyali mali bazinikele kwisivumelwano sonyaka omnye, oku kuthetha ukuba utyalomali lwakho oluyintloko aluyi kuhlawulwa kude kube kuphela unyaka. Oku kunokuba yingxaki ukuba ufumene ingxaki yokuhamba kwemali okwexeshana kwaye ufuna ukukhupha utyalo-mali lwakho.
Iinkampani zemigodi yamafu zikwishishini lokwenza imali. Kananjalo, kuya kufuneka ukuba uqonde ngokuqinileyo ubume bemali engaphantsi. Kwezinye iimeko, unokuhlawuliswa umrhumo oguqukayo ngokusekwe kubungakanani bombane osetyenzisiweyo. Ngamanye amaxesha, indawo yemigodi yelifu inokuthatha ipesenti yemali oyifumeneyo kwinzuzo. Umzekelo, iqonga linokuthatha i-10% yomvuzo wakho we-0.0001 we-BTC.
Ngaphaya koko, kuya kufuneka uvavanye ukuba iqonga lezemigodi yefu liyabelana okanye awabelani ngazo zombini umvuzo webhloko kwaye imirhumo yentengiselwano block okanye umvuzo nje. Kwiimeko ezininzi, iiplatifti ziya kugcina iifizi zentengiselwano abaziqokelele xa bephumelele umvuzo webhloko, okuthetha ukuba uphoswa kwisivuno esongezelelweyo.
Umngcipheko wokuSebenzisa iSiza seMigodi yeLifu
Njengakwimeko yayo nayiphi na imveliso yotyalo-mali, kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo ngomngcipheko ophantsi. Emva kwayo yonke loo nto, ii-cryptocurrensets zisebenza kwimizi yokuqikelela, ngenxa yoko kusoloko kukho ithuba lokulahleka kwemali.
Ites IiSayithi zokuGaya iMigodi yamaLanga
Nangona imigodi yelifu iseyinto entsha esengqiqweni, kuye kwakho imizekelo emininzi yeewebhusayithi zobuqhetseba ezibaleke nemali yabathengi.
Ngelixa iqonga linokuthi ekuqaleni liqale ukusebenza ngendlela esemthethweni, siwabonile amatyala apho indawo yokumba imigodi yelifu ivala nje ubusuku bonke, kunye nabatyali mali belahlekelwa yinto yonke.
Ekugqibeleni, akukho siqinisekiso sokuba oku akuyi kwenzeka kuwe. Okuncinci ngenxa yendalo engalawulwayo kunye nengenamda ye-cryptocurrencies.
Cond Iimeko zentengiso
Uya kuba yimigodi ye-cryptocurrencies, ke inzuzo yakho iya kuhlawulwa kwi-cryptocurrencies. Ke, ukuze uqonde inzuzo yakho ngeeponti kunye nepeni, kuya kufuneka uthengise iingqekembe zakho kwimarike evulekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba iimarike ze-cryptocurrency zihamba ngexesha le-bearishness, unokufuna ukukhuphela iingqekembe zakho ngexabiso lesaphulelo.
Oku kungakhokelela kwilahleko, emva koko yenze utyalo-mali lokumba umgodi welifu lingafuneki. Kwiimeko ezinzima kakhulu, ukuba iprojekthi ye-cryptocur lwemali efanelekileyo iwele ngqo, iingeniso zakho zemigodi yefu zinokungabi naxabiso.
Ukutshixelwa kwisivumelwano esingenzi nzuzo
Nangona indawo yokumba imigodi yelifu inokuba yayiphumelele ngaphambili kwimigodi ye-cryptocurrency ethile, akukho siqinisekiso sokuba oku kuya kuhlala kunjalo.
Umzekelo, ukuba umsebenzi omkhulu wokumbiwa kwemigodi uvelisa isixhobo esitsha sehardware esinamandla okuvelisa amandla angaphezulu kwayo nayiphi na into kwintengiso, indawo yemigodi yefu isenokungabi nakho ukukhuphisana.
Oku kunokuba yingxaki enkulu ukuba utshixelwe kwisivumelwano semigodi yelifu ongakwaziyo ukuphuma kuso.
Iindawo eziGcweleyo zeMigodi yeLifu 2022
Nangona singacebisa ukuba wenze olwakho uphando ngaphambi kokujoyina indawo entsha yokumbiwa kwemigodi yelifu, sidwelise ezona zikhetho zethu zingezantsi. Ngokubaluleka, qiniseka ukuba iqonga lilungele iimfuno zakho, kwaye uyayiqonda imingcipheko.
Ukuba usifundile isikhokelo sethu kwiBitcoin imigodi yefu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, kuyathenjwa ukuba ngoku unokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela esisebenza ngayo esi sithuba. Oku kuya kubandakanya izinto ekufuneka uziqwalasele ekukhetheni indawo yokumbiwa kwelifu, kunye nokuvavanya ukuba yeyiphi na imali yedijithali emayini.
Okona kubaluleke kakhulu, uyazi nobungozi obuninzi bokutyala imali kwindawo yemigodi yefu-njengokuvalelwa kwisivumelwano esingenzi nzuzo okanye ukusebenza kwindawo yentengiso ye-bearish cryptocurrency.
Ngale nto ithethwayo, ukumbiwa kwelifu kunika amandla okwenza inzuzo encinci, nangona ingaguquguquki. Akukho mfuneko yokuthenga naziphi na izixhobo zexabiso eliphezulu, kwaye akufuneki ukhathazeke kukusetyenziswa kombane. Endaweni yoko, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi na imali ofuna ukuyifaka kum, ukuba ufuna ukutyala imali engakanani, yiyo loo nto.
Ngaba akhona amaqonga okombiwa kwamafu asimahla?
Ngelixa amaqonga aliqela emigodi yelifu enokubanga ukuba abonelele ngeenkonzo zawo ngaphandle kwentlawulo, akunakulindeleka ukuba ibe ngumsebenzi osemthethweni. Emva kwayo yonke loo nto, kutheni iqonga linokungena engxakini yokutyala iimfumba zemali kwimigodi yemigodi egcweleyo, kuphela emva koko unikezele ngeenkonzo zalo zemigodi yefu simahla?
Ndiyazi njani ukuba indawo yokumbiwa kwemigodi yelifu inokuthenjwa?
Iindawo zemigodi yefu zisebenza ngendlela engalawulekiyo, ke kuya kufuneka ukhathalele ngokwenene ukuba ubhalise nabani. Eyona nto unokuyenza kukujonga ukuba iqonga lisebenze kangakanani, kunye nokuphononongwa kwengxelo kwindawo kawonkewonke evela kubatyali mali bangaphambili nabangoku.
Ixabisa malini ukumbiwa kwamafu?
Kwelinye icala, akuyi kufuneka uthenge nayiphi na i-hardware. Ke unokutyala imali encinci okanye kakhulu njengoko uthanda. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wokusebenzisa indawo ye-mining cloud, eya kuhluka ukusuka kumnikezeli-kumnikezeli.
Zide kangakanani iikhontrakthi zokumba umgodi welifu?
Elona xesha lincinci lekhontrakthi elinikezelwa ngamaqonga okumbiwa kwemigodi ngelifu aya kwahluka ngokwendawo ukuya kwindawo. Ngelixa abanye bebonelela ngekota encinci yeenyanga ezi-6, ezinye zinde.
Ngaba ndingasishiya isivumelwano sam semigodi ilifu kwangethuba?
Oku kuxhomekeke kwimimiselo yesivumelwano. Ezona ndawo zibalaseleyo zemigodi yelifu ziya kubonelela ngesigatshana sokupheliswa esikuvumela ukuba uphume kwisivumelwano ukuba sihlala singenanzuzo kwinani elithile leentsuku ezilandelelanayo.
Zeziphi ii-cryptocurrensets endinokuthi ndizisibekele?
Iindawo zemigodi yefu ziya kuxhasa i-cryptocurrensets kuxhomekeke kwizixhobo zekhompyutha abanazo. Kungenxa yokuba ii-cryptocurrensets ziya kuhlala zine-hashing algorithm, ke amaqonga kufuneka atyale imali kwizixhobo ezizodwa. Nangona kunjalo, ukhetho lubandakanya iBitcoin, i-Ethereum, iBitcoin Cash, iLitecoin, kunye nokunye.
Ihlawulwa njani iingeniso zokumba umgodi ngelifu?
Iindawo zemigodi yefu zihlala zisasaza inzuzo yonke imihla. Oku kuhlala kukwimali enye oyimigodi yelifu. Umzekelo, ukuba uqhuba i-Ethereum, uya kufumana inzuzo yakho yemihla ngemihla kwi-ETH.